सलमान खानले ‘बिग बोस १४’ का लागि लिए यति मोटो रकम ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/सलमान खानले ‘बिग बोस १४’ का लागि लिए यति मोटो रकम !
१५ भाद्र २०७७, सोमबार मुम्बई – सलमान खानले होस्ट गर्दैआएको लोकप्रिय रियालिटी शो ‘बिग बोस’ को १४ औं सिजन छिट्टै शुरु हुँदैछ । भारतीय च्यानलबाट प्रसारण हुने यो शोको दर्शकले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।शोको होस्ट गर्ने सलमान
खानले महंगो पारिश्रमिक लिएको चर्चा चलेको छ । ‘बिग बोस’का लागि हरेक वर्ष सलमानको पारिश्रमिक बढ्दै आएको छ ।यो पटक भने पहिलेको तुलनामा धेरै पारिश्रमिक बढेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार सलमान खानले यो शोबाट करोडौं रकम लिने भएका छन् ।
खबरका अनुसार ‘बिग बोस १४’ का लागि सलमान खानले करीब २ सय ५० करोड भारु पारिश्रमिक लिनेछन् । यो शोका लागि सलमान खानले हप्तामा एकपटक शूटिङ गर्नेछन् ।एक हप्तामा सलमान खानलाई २० करोड ५० लाख भारु पारिश्रमिक दिइनेछ । यो हिसाबले उनले एक एपिसोडका लागि१० करोड २५ लाख भारु लिनेछन् ।
आजबाट १६ दिन बिर्सेर पनि नगर्नुस यी काम नत्र जीवन भर दुःखी हुनुपर्ने छ